विकासले गति लिंदै छ त हलेसी क्षेत्रमा ? «
विकासले गति लिंदै छ त हलेसी क्षेत्रमा ?
प्रकाशित मिति : 24 January, 2020 9:25 pm
खोटाङ । हलेसी महादेव स्थान त्रिधार्मिक स्थल आफैमा वर पाउने र संसार भरको आस्थाको केन्द्र भएता पनि यहाँको भौगोलिक अवस्था र जनताको अवस्था पिउने पानी, खाने अन्न वासको अवस्था दयनिय नै हो । संसारको व्यक्तित्वहरु आर्थिक हिसाबले खोटाङ जिल्ला नै किन्न सक्ने क्षमता भएका व्यवसायी, उद्यमीहरु यही हलेसीबाट वर लिएर जान्छन् । कथा जेसुकै होस तर आशिष र वर लिएर जान्छन् । विश्वास गर्छन । तर वास्तविकता यहाँको स्थानिय समूदायहरुलाई नै थाहा छ । तर पनि अब विस्तारै यस क्षेत्रमा सुक्खा क्षेत्र घोषणा भएसँगै लिफ्टिङको लागी काम बढीरहेको छ भने, होइदे र लिम्चुङबुङ गापाको भाते गाउँ जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । यसलाई समयसापेक्षिक रुपमा विकासको गति बढीरहेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।
हलेसी चर्चित धार्मिक स्थल भएर पनि भौगोलिक रुपमा धेरै पछाडी परहेको हलेसी क्षेत्र मानिन्छ । त्रिधार्मिक स्थल मात्र नभएर प्राकृति स्रोत साधनले अपार विकासको सम्भानाको क्षेत्र भएको यस क्षेत्रमा पानीको अभावले यहाँको जनताहरु बसाईँ जानुको कुनै विकल्प नभएको अवस्था थियो । अन्न ९९.९९ प्रतिशत आकाशे पानीको भरमा वस्नु पर्ने भएकोले यहाँको जनताहरु जब फागुन चैत्र बाँजो मार्न अनि वैशाख, जेष्ठ मकै छर्न र असार श्रावण हिउँदे वाली लगाउन दिन रात आकाश तिर पानी पर्ने संकेत पुर्खा देखी हेर्दै आएको र अहिले पनि त्यही हेर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने नेपालको सबैभन्दा लामो नदी त्यही हलेसीको भूमि भएर बहिरहेको छ । तर त्यो पानीको सदुपयोग गर्नको सट्टा वारी र पारी गर्न, विवाह र रगतको नाता सम्बन्ध विस्तार भएकोले वारीपारी गर्न सुनकोशीले वर्षा याममा ६ महिना बाटो रोक्ने, बाँकी छ महिना पनि सिमलको काठे डुंगाको भरपर्नु पर्ने, अकालमा कैयौं ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो ।
तर अव विस्तारै विकासले गति लिंदैछ । सोही अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपाली वडा नं.५ दुर्छिमको साविक ९ होइदेमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भएको छ । उक्त पुल निर्माणको लागी मा. सभासद पाँचकर्ण राईले आवश्यक पहल सम्बिन्धत निकायहरुमा गरे पश्चात सम्पन्न गर्नमा सहयोग भएको वडा सदस्य फलाम सिंह राईले बताउनु भयो । उक्त पुल निर्माणको लागत १ करोड १० लाख भएको, सदस्य राईले बताउनु भयो । पुल निर्माणसँगै मा. पाँचकर्ण राईको प्रमुख आतिथ्यमा, नेकपा जिल्ला कमिटी सचिव राम दंगाल, कार्यलय सदस्य संगिन किराती, सचिवालय सदस्यहरु खडेन्द्र राई, आमो राई, अकिल राई, जिल्ला सदस्य तथा वडा अध्यक्षहरु रमेश तिवारी, भलराज राई, नगर अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार राई, वडा पार्टी सचिव भविन्द्र राई, वडा नं.२ निर्वाचित सदस्य घणश्याम राई लगायत स्थानिय नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।